About Us - Ningbo Shenhe Mitondra Co., Ltd
Ningbo SHENHE FAMOAZANA CO., LTD, naorina tamin'ny 1995, dia miorina ao amin'ny Ningbo City, dia ny atsimo amoron'i Hangzhou Bay Ranomasina-namakivaky Bridge. SHB dia matihanina mpanamboatra ny kely sy ny madinika marina tsara Groove lalina baolina nitondra, tena-ny fampifanarahana baolina nitondra, efatra-teboka fifandraisana baolina nitondra sy ny tsy faneva baolina-jaza izy.
Taorian'ny tapaka fampandrosoana ny 23 taona, SHB tompon'ny orinasa faritra 40000 metatra toradroa amin'ny faran'izay-mitoto vary pamokarana sy ny fivoriana mandeha ho azy pamokarana, ary koa ny hafa nandroso fanodinana sy ny fitiliana fitaovana maherin'ny 200 vondrona, izay constitude tanteraka refy, fanadihadiana sy ny rafitra fitiliana. Ny famokarana fahafahana mahay Output 50 tapitrisa karazana baolina kely sy madinika bearings. Ny vokatra dia azo ampiharina amin'ny fiara, môtô maotera, fitaovana elektrika sy avo-kilasy fitaovana elektrika. Ankoatra izany, dia mitondra fiara manokana famokarana tia faritra, indrindra-olona voatendry sy pamokarana. Ny vokatra dia manana miovaova sy azo antoka kalitaon'ny ela velona, ​​haingam-pandeha, ary ambony entany, nandresy ny matoky ny mpanjifa. Shenhe mitondra manarona ny tsena anatiny sy ny tsena an'i Etazonia, Eoropa, Japana, Taiwan, Azia Atsimo Atsinanana ary ny hafa firenena sy ny faritra.
Ny orinasa aorina sy fampiharana ny maoderina fitantanana rafitra, nampihatra ny integral rafitra fitantanana, ny 5S an-tsaha rafitra fitantanana, ary Kanban kolontsaina, mifehy ny famokarana ny fiara mitondra amin'ny ISO / TS 16949: 2009 toetra rafitra fitantanana, ary ny tsy fiara mitondra amin'ny ISO9001: 2008 kalitao fitantanana ny rafitra